Lafta Gareen oo la kulmay maamulada degmooyinka Gobolka Bakool -
Home News Lafta Gareen oo la kulmay maamulada degmooyinka Gobolka Bakool
Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen oo xalay ku hoyday degmada Xudur ayaa la kulmay Maamulada degmooyinka Gobolka Bakool, gaar ahaan maamulada Xudur, Rabdhuuro iyo Tiyeeglow, isagoo kala hadlay dhibaatooyinka ka jira gobolka.
Lafta Gareen ayaa kala hadlay maamuladaas culeyska ka jira deegaanadooda oo ay go’doomiyeen Al-Shabaab iyo sidii dadka deegaanka gargaar loo gaarsiin lahaa.
Guddoomiyaha Maamulka degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo ka warbixiyay kulanka ayaa sheegay inay Madaxweynaha u gudbiyeen dhibaatooyinka ka jira Gobolka Bakool, gaar ahaan xaaladda adag oo ay ku sugan yihiin Shacabka degmada Xudur oo u go’doonsan Al-Shabaab.
Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa balan-qaaday si degdeg ah wax looga qaban doono dhibaatada heysta shacabka Gobolka Bakool, isla markaana laga qaadi doono go’doonka saaran degmada Xudur.
Shacabka ku dhaqan degmada Bakool ayaa bannaan bax ay dhigeen maalmo ka hor waxay ka codsadeen dowladda federaalka in culeyska saaran degmadooda laga qaado, kaddib markii Al-Shabaab ay go’doomisay, isla markaana gaadiid fara badan oo ganacsato u rarnaa oo siday raashin iyo agab kale lagu gubay duleedka Xudur.
Previous articleTwo Afghan female Supreme Court judges shot dead in Kabul’s car jail
Next articleSaciid Deni oo amar ku bixiyay in la dhaqan geliyo go’aamadii la soo saray